Waa Guri Cusub oo Labo biyano ah. kuna yaala Goob amaankeeda laysku helayn karo. Agagaarka airport Muqdisho dhanka Madina Gate. Waa dhismo Dabaq ka kooban #11_Qol_jiif ah, #5_Musqul, #2_Kushiin, #Mudul weyn, #Masjid iyo #Parking Baabuur. Wuxuu sidoo kale lee yahay gurigan #2_Qol oo service ah. Qiimaha kirada bishii waa $4,000 iyo Heshiis.